Voalohany Teo Amin’ny Tantarany I Porto Rico No Tsy Nahaloa Ny Trosany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Aogositra 2015 6:11 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Italiano, English
Mikapoka mafy ireo olon-tsotra any Porto Rico ilay tsy fahafahana lehibe an'ny governemanta mandoha trosa. Sary nalain'i OliverZena ary nalefa ho an'ny daholobe.
Voalohany teo amin'ny tantarany izao, tsy nahaloa ny 58 tapitrisa dolara teo amin'ny trosany mitentina 483 tapitrisa dolara tamin'ny Commonwealth i Porto Rico, tapitra tamin'ny 3 Aogositra ny fetrandro tokony nandoavana io. Avy amin'ireo olon-tsotra Portorikàna ny ankamaroan'ireo 58 tapitrisa dolara, avy amin'ny vola angonina sy ampindramina, izay nividianana “bonds du trésor” tamin'ny Fikambanana Famatsiambolam-panjakana Porto Rico (Corporación para el Financiamiento Público).
Nisafidy ny tsy handoa io trosa io ny governemanta noho ny antony ara-stratejika. Tsy manana fahefana ara-dalàna hiadiana any amin'ny fitsaràna ireo tompon'io trosa io (olon-tsotra Portorikana ny ankamaroany), tsy sahala amin'ireo tompon-trosa amin'i Porto Rico avy any ivelany.
Porto Rico ve no Gresy any Karaiba?
Tena noresahana betsaka maneran-tany i Porto Rico sy Grèce tato ho ato. Natao tato anatin'ny roa taona farafahakeliny ny fampitahàna azy roa ireo (jereo ito lahatsoratry ny Global Voices tamin'ny taona 2012 ito, mitondra ny lohateny hoe “Porto Rico: Grèce Vaovao?“). Na izany aza, mety ho tena sarotra kokoa ary mampalahelo kokoa noho ny an'i Grèce ny toe-javatra ao Porto Rico.
Raha efa olana lehibe tokoa ny fananany trosa mihoatra ny 72 lavitrisa dolara — izay tokony tsy maintsy hefain'i Porto Rico alohan'ny hisian'ny fifampiraharahana rehetra, araka ny Lalampanorenany — mbola mihasarotra ihany ny toe-javatra rehefa jerena hoe tsy manana sehatra araka ny lalàna entina hanamboarana ny trosany i Porto Rico.
Nisy lalàna nolanian'ireo Mpanao Lalàna ao Porto Rico tamin'ny taona lasa, izay hamela ireo orinasam-panjakana hametraka ny taratasy maha-maty antoka tanteraka azy, kanefa nolazain'ireo fitsaràna federaly any Etazonia ho tsy mifanaraka amin'ny lalampanorenana, herindrandro maro taty aoriana. Nilaza ireo fitsaràna fa ny governemanta federaly ihany no afaka manapaka ireo resaka mifandraika amin'ny fatiantoka tanteraka — filazàna izay somary mandrangitra ihany, raha jerena ny zava-misy hoe noesorina tao anatin'ny afaka mametraka taratasinà fatiantoka tanteraka i PortoRico araka ny Andalany faha 9 amin'ny “Lalànan'ny Fidirambola Anatiny”. Ny vokany, tsy afaka mampiasa ireo lalàna federaly i Porto Rico mba hanamboarana ny trosany, kanefa tsy afaka mamorona ireo lalànany manokana ihany koa.
Ny hany hita ho vahaolana tokana izao dia ny mandresy lahatra ny Kongresy mba handany lalàna izay hanome sata manokana araka ny lalàna. Araka ny nosoratan‘i Sergio Marxuach, ao amin'ny Ivon-toerana ho an'ny Toekarena Vaovao, vao haingana:
Tsy famehezan-kibo bebe kokoa no zavatra tsy ilain'i Porto Rico amin'izao fotoana izao, satria miankina tanteraka amin'ny fanarenana ny fitomboan'ny harinkarena ny fahafahany mamerina ny trosany. Miaraka amin'izany, tsy afaka misy fitrakàn'ny harikarena raha tsy misy trosa azo zakaina, kanefa izany etsy ankilany tsy ho tanteraka raha tsy misy fanamboarana mazava farafaharatsiny ny sasany amin'ireo trosany.
Luis Gallardo Rivera, manoratra ao amin'ilay gazetiboky nomerika La Respuesta, manazava vahaolana mety ho afaka ampiasain'ny governemanta mba hanatsaràna tokoa ny toe-javatra:
Amin'ny lafiny iray, niasa tamin'ilay Andalana faha 6, Ampahany faha 2 ireo mpanorina ny Lalampanorenan'i Porto Rico, fandraràna ny fandaniana mihoatra ny 15% amin'ny vola miditra amin'ny trosam-panjakana. Manambara io Andalana voalaza io fa tokony ny fandoavana trosa no atao alohan'ny fandaniana hafa ataon”ny fanjakana. Na dia nampiharin'ny governemanta Portorikàna hatrizay aza io fandoavana mialoha ny trosa rehetran'i Porto Rico io, 14,7 lavitrisa dolara ihany ny voafehin'io andalany ao amin'ny lalampanorenana io. Samy nanondro io elanelana io ho toy ny trosan'ny nosy “mivoana amin'ny lalampanorenana” ireo mpamakafaka sy ireo mpanao politika mitovy hevitra. Ny sasany […] milaza ny maha mivoana amin'ny lalampanorenana ilay trosan'ny fanjakana, noho izany tsy ara-dalàna ka tokony ho foana. […] Na eo aza izany, kely ny finoana hoe hitovy hevitra sy hanaraka izany ny governemanta.
Manana ny zavatra rehetra, kanefa mandà tanteraka ny hanampy mba hanamaivana ilay kirizy ny Kongresy Amerikana. Mialoha izany, nanambara ny Trano Fotsy fa, hihataka ihany koa izy amin'ny tsy hidirany mivantana amin'ny olana ara-bolan'i Porto Rico (vakio: tsy misy drafitra famonjena). Na izany aza anefa, nilaza am-pahibemaso ny filoha Obama fa tokony hihetsika ny Kongresy, mba hanome an'i Porto Rico ny sehatra voafaritry ny lalàna ilainy mba hanamboarana ny trosany, nanjohy ireo olona manan-danja maro hafa izay niantso ny handraisan'ny Kongresy hetsika mitovy amin'izay, tao anatin'izany ilay mpirotsaka ho filoham-pirenena, Hillary Clinton, ka hatramin'ireo toniandahatsoratry ny New York Times. Mbola ho hita eo raha horaisin'ny Kongresy na tsia ny torohevitr'izy ireo .